Mootummaa Ce’umsaa Oromiyaa kan jedhu maali? – Ayyaantuu Online
HomeAfaan OromooMootummaa Ce’umsaa Oromiyaa kan jedhu maali?
Jalqaba maaliif akka mootummaan ce’umsaa barbaachise lafa keenya. Nuti akka Oromootti bilisummaaf qabsoofne erga harka galfanne jennetti diinonni keessoo fi alaan nu harkaa butanii ilkee waraabessaatti deebisan. Bara 2018 dura kan ture ajjeechaa fi hidhaan daraan dabalee salphinaa fi gadadoon mana Oromoo maraa seenee jira.
Oromoon salphifamee akka sareetti kosii irratti dhiigni dhangala’aa jira. Du’aa (reeffa) akka lafaa hin fuune dhorkuun Joge (allaattii) itti roobsisaa jiru. Kaan gatanii waraabessi alatti fixe. Namoota beekamoo akka Hacaaluu Hundeessaa konkolaataa keessatti ajjeesanii awwaala isaa akka hin taanetti raawwatan. Isarra darbuun ofiin dhaqanii siidaa dhaabanii akka Oromoon irratti hin hirmaanne dhorkatan.
Amma “mootummaa” jedhee kan of waamu maafiyaan weerartuun Fulbaana 30 booda akka Heera amma jiruutti mirga aangoo qabatee itti fufuu hin qabu. Aangoo qabatee taa’ee maqaa filannoo jedhuun ajjeesuuf illee mirga hin qabu. Mootummaan Naannoo Tigiraay didee filannoo gaggeessee Paarlaamaa haaraa hundeessee jira. Yeroo gar-tokkeen biyyattii mirga heeraa fi seeraan jiru fayyadamuun mootummaa dhaabbatee naannoo isaa tiksuuf jiru kanatti Oromiyaan immoo bakka nafxanyaan irratti wal gaansu ta’ee argama.
Paartileen siyaasaa Oromoo yeroon filannoon akka gaggeeffamu gaafata turanis mootummaan maafiyaa gurra muka boqqolloon duuchatee bituu fi dhiituu itti fufe. Amma garuu heeraa fi seera ittiin dhaadatu sanaan itti fufee bituu waan hin dandeenyeef Addi Bilisummaa Oromoo (ABO) itti gaafatama ofitti fudhachuun akka Mootummaan Ce’umsaa Oromiyaa gadi dhaabbatu irratti hojjetaa jira. Maafiyaan biyya weerare kun hamilee ittiin fulbaana 30 booda turu hin qabu.
Mootummaa Ce’umsaa Oromiyaa jechuun kan ABO qofti bulchu osoo hin taane dhaabbileen Oromoo hundi itti hirmaachuun kan fuulduree Oromiyaa itti murteessanii fi kallattii kaa’an ta’a. Haga mootummaan seera qabeessi uummataan filamutti mootummaan maafiyaa kun Oromiyaa irraa harka kaasuu fi aangoo gadi dhiisuun gara Mootummaa Ce’umsaa Oromiyaa jedhamutti kennuu qaba.
Kun akka ta’uuf Addi Bilisummaa Oromoo Hawaasa fi dhaabbilee Addunyaa gurguddoo ta’an waliin walitti dhiyeenyaan ni hojjeta.
Maafiyaan kun kana didee humnaan itti deemuun isaa ifa galaa dha. Kanaaf immoo uummatni Oromoo gamanumaa of qopheessuun dirqama ta’a.
Hojii Addi Bilisummaa Oromoo eegale kana Ilmaan Oromoo marti bakka jiruu itti hirmaachuun deeggarsa lammummaa gochuu qaba.